आफ्नाे लागी उपयुक्त करियरकाे छनाेट यसरी गर्नुहाेस् ? - ज्ञानविज्ञान
करियरलाइ हाम्राे समाजमा फेशनकाे रूपमा लिने चलन छ । तर करियर भनेकाे फेशन, सामाजिका दबाब या साथीकाे लहैलहैमा लागेर छनाेट गर्ने विषय हाेइन । प्रत्येक व्याक्तिकाे छुट्टाछुट्टै क्षमता र विशेषता फरक हुने हुनाले तपाइकाे साथीकाे लागी उपयुक्त करियर, तपाइकाे लागी उपयुक्त नहुन सक्छ ।
करियरले तपाइकाे भविष्य बाेकेकाे हुन्छ, त्यसैले करियर छनाेट गर्दा साेच विचारका साथ गर्नुपर्छ ।सबैभन्दा पहिले त अाफुलाइ चिन्नुहाेस् । तपाइकाे के कुरामा रूचि छ ? के काम गर्दा तपाइलाइ भित्रै देखि खुसी लाग्छ ? स्कुलमा तपाइलाइ कुन विषय पढ्दा सबैभन्दा रमाइलाे लाग्छ र कुन विषयमा तपाइले सबैभन्दा राम्राे गर्नुभएकाे छ ?
तपाइ खाली बसिरहेकाे समयमा कस्ता कुराहरू दिमागमा खेलाउनुहुन्छ ? यी सबै प्रश्नकाे उत्तु खाेज्नुहाेस् ।जब तपाइ ति उत्तुहरू भेट्नुहुन्छ, ति उत्तुहरू विभिन्न पेशा वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् । ति पेशा वा क्षेत्र के-के हुन् र कस्ता कस्ता काम हुन्छन्, त्याे खाेज्नुहाेस् ।
शिक्षक, अाफ्ना अभिभावक, अाफु भन्दा माथिल्लाे शैक्षिक तहका व्याक्तिहरूलाइ अाफ्ना रूचि बारे बताउनुहाेस्, उनिहरूबाट विभिन्न पेशाकाे बारेमा बुझ्नुहाेस् र अाफ्नाे लागी उनिहरूबाट सुझाव लानुहाेस् ।अब अाफुबाट निस्केका ति पहिलेका उत्तरहरू, ति पेशा तथा क्षेत्रकाे बारेमा मिलेकाे जानकारीहरू र अरूले दिएका सल्लह बिच मुल्याङ्कन गरेर हेर्नुहाेस् र तपाइलाइ कुन कुन क्षत्र मन पर्याे ?
कुन कुन काम तपाइकाे रूचि अनुसार परे, ति काम वा क्षत्रकाे छाेटाे सुचि बनाउनुहाेस् ।त्यसपछी ति सुचिमा अाएका क्षेत्र वा पेशाकाे बारेमा विस्तृत बुझ्नुहाेस् । ति क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नकाे लागी अावश्यक याेग्यता, क्षमता बुझ्नुहाेस् । उक्त क्षत्रकाे करियरकाे लागी अाधारभुत कुराहरू केके हुन्, छुट्याउनुहाेस् ।
त्यसबाट कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ, त्यसमा लाग्ने समयावधि, मेहनत के-कति हाे, त्यसबाट तपाइले भविष्यमा अाफुलाइ कुन पदमा देख्न सक्नुहुन्छ, तपाइकाे जिवनकाे लक्ष्य, त्याे करियरले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन अादि सबै जानकारी लिनुहाेस् ।यसरी ति सबै क्षेत्रकाे जानकारी लिएपछी, अाफ्नाे लागी उपयुक्त हुने करियर छनाेट गर्नुहाेस् ।
अब त्याे करियरमा सफलता गर्नकाे लागी करियरकाे एउटा लक्ष्य निर्णारण गर्नुहाेस् ।करियरकाे लक्ष्य निर्णारण गरिसकेपछि, अगाडी बढ्नकाे लागी के-के गर्नुपर्छ, त्यही अाधारमा अाफ्ना याेजनाहरू बनाउनुहाेस् ।
यदि तपाइ कलेजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ वा भर्खर कलेजमा भर्ना हुन लाग्नु भएको छ ? छ भने तपाईं आफ्नो जिवन र करियरको विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । यो यस्तो समय हो, जब तपाईंले लिएको एउटा निर्णयले तपाईंको भविष्यमा असर गर्नसक्छ ।
आज हामी तपाइलाइ विज्ञहरुले बताएका केही टिप्स दिन गइरहेका छौं, जुन टिप्सबाट तपाइले यो आफ्नो करियर बनाउनका लागि धेरै कुरा जान्न सक्नुहुने छ ।
३. तपाइ भविष्यमा के गर्न चाहानुहुन्छ ? यसको निर्णय तपाईं आफैंले आफ्नो क्षमताअनुसार लिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंको साथी के गर्दै छन् सोचेर कुनै निर्णय नलिनुहोस् । निर्णय लिने समयमा यो पनि सोच्नुस कि तपाईले रोजेको क्षेत्रमा ५ देखि ७ वर्षपछि कस्तो स्कोप रहने छ ।
ती मानिसहरु जो तपाइकाे पढाई र करियरका लागि समस्या बनेका छन्,उनीहरुलाई आफ्नो लिस्टबाट हटाउनुहोस् । यसको मतल ती साथीहरुलाई आफ्नो जिबनबाट बाहिर निकाल्ने भने हैन । उनीहरुसँग सम्बन्ध बनाई राख्नुस् । हरकोही कुनै समय काम लाग्ने छन् ।
भन्छन् – पढ्नु र पौडिनु उस्तै-उस्तै हो रे, तरिका जाने सजिलै पार गर्न सकिन्छ, नजाने डुबिन्छ । यसर्थमा पनि पढ्ने कुरा नितान्त प्राविधिक एवम् मनोवैज्ञानिक कुरा हो । त्यसैले हामीले बलपूर्वक पढ्न खोज्नु हाम्रो मुर्खता हो ।बलपूर्वक पढ्दा पनि केही कुरा तत्कालका लागि याद त हुन सक्छ तर यसले दिगोपना दिन भने पक्कै सक्दैन ।
अर्को कुरा, बलपूर्वक पढ्दा हाम्रा अगाडि किताब त हुन्छ, तर मन भने हामीसँग हुँदैन । कता कता बादलमाथि पुगिसकेको हुन्छ । त्यस समय न पढाइ राम्रोसँग हुन्छ, न त अन्य कार्य नै । यसरी हाम्रो महत्वपुर्ण समय बेकारमा गैरहेको हुन्छ ।अर्कोतर्फ, मन नलागी नलागी कुनै काम गर्दा सो काम पीडादायी पनि हुन जान्छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त यसरी जबर्जस्ती पढ्न खोज्दा मानिसको सिर्जनशीलता पनि नष्ट हुँदै जान्छ । यसै पढाइलाई पढुँपढुँ लाग्ने, पढेर छिटो बुझिने र पछिपछिसम्म पनि सम्झिरहने बनाउन पाए बिद्यार्थी जीवन कति सुन्दर हुँदो हो ? भन्ने सोचमा सबै हुनुहुन्छ होला ।
अरुलाई भन्नुस्/ नभन्नुस् तर आफ्नो मनलाई आफ्नो गन्तव्यका बारेमा स्पष्ट पार्नै पर्छ । गन्तव्य प्रष्ट छैन भने पढ्नमा अल्छी लाग्ने, विषय कठिन लाग्ने कुनै पनि बहानामा पढाइ छोड्न खोज्छ मनले । मैले आज के पढ्नुछ र कति पढ्नु छ ? सो प्रष्ट हुनै पर्छ ।
अनि आज मैले यति पढें भने के हुन्छ ? मेरो जीवनको लक्ष्यमा यसले के प्रभाव पार्दछ, सो पनि जोड्न सके अझ राम्रो ।यसरी लक्ष्य निश्चित भएको खण्डमा तपाईंलाई अध्ययनमा रुची बढ्नेछ र पढेको कुरा पनि पछिसम्मको लागि टिकिरहनेछ ।
मनोरञ्जन/मस्तीले जो-कोहीको मनलाई सजिलै तानिहाल्छ । यसकारण पनि हामीले हाम्रो पढाइलाई पनि मनोरञ्जनसँग जोड्न सक्यौं भने पढेको कुरा सजिलै बुझिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर पछिपछिसम्म पनि यो टिकिरहन्छ ।यसका लागि हामीले या त पढाइलाई नै तत्काल आनन्द, मस्ती वा रमाइलो कुरा प्राप्तिसँग जोडेर लिन सक्छौं या त पढाइलाई लक्ष्य प्राप्ति हुँदाको रमाइलो कल्पनासँग जोड्न सक्छौं ।
म यो गर्न सक्छु भन्ने नभई कुनै पनि कार्यहरु सही रुपमा सम्पन्न हुँदैनन् । उपलब्धि हासिल हुँदैनन् । सजिल्यै गर्न सकिने कार्य पनि आत्मविश्वास कमजोर हुँदा राम्रोसँग गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले पनि हामीले आफ्नो मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ ।यसका लागि आफैंले आफ्ना सकारात्मक पक्षहरुलाई हाइलाइट गर्दै जानु उत्तम हुन्छ, अरुले वाह-वाह गरेर सिर्जना भएको आत्मविश्वास भन्दा यो एकदमै दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।
बिनाकारणको पढाइले कहिल्यै तपाईलाई सोचेको गन्तब्यमा पुर्याउने छैन । यो पाठ किन पढ्ने ? अहिले नै किन पढ्ने ? लगायतका सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ तपाईसँग । अन्यथा तपाईको मनले तपाईलाई पत्याउँदैन । जसको परिणाम पढ्नमा फिटिक्कै रुची रहँदैन ।
गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने सुविधा भएसम्म पढाइ लगायत कुनै पनि कार्यहरु प्रभावकारी हुँदैनन् । यी सबैकुरा प्रष्ट पार्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईंको मनले विश्वास गर्छ । पढ्नमा सहयोग गर्छ ।
परिणाम प्रष्ट नहुने कार्यप्रति निरन्तर लगाव लागिरहन सक्दैन । जति पढे पनि कति जानेको छु नै थाहा नहुने, आफ्नो अवस्था जाँच गर्न नसकिने, कति अध्ययन गर्दा के हुन्छ सो परिणाममा नदेखिने भयो भने पढाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन । हरेक कार्यको परिणाम खोज्छ हाम्रो मनले ।
परिणाम नदेखिने र निरन्तर प्रयास मात्र गरिने कुनै पनि काम रुचीपरक हुन सक्दैन ।त्यसैले पढाइलाई परिणाममा विभाजन गर्नुस्, कति पढ्नुपर्ने हो ? कति सकियो र कति बाँकी छ ? यी सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ तयार पार्नुस् ।
सारांशमा, हाम्रो मन र शरीरको तालमेल तब मात्र मिल्छ, जब हामीलाई आनन्द मिल्छ । त्यसैले तपाईंले यदि पढाइ आनन्ददायी कुरा हो भनेर मनलाई विश्वस्त पार्न सक्नु भयो भने सबै समस्या आफसेआफ समाधान हुनेछन् । र तपाईंको पढाइ सहज, दीर्घकालीन ,प्रभावकारी अवश्य हुनेछ ।
Don't Miss it जगिंङ गर्दा हुन्छन् यस्ता फाइदै फाइदा
Up Next दिक्क लागेकाे मानसिक स्थितीमा के गर्ने ? सहयाेगी टिप्स